အလှအပ Archives - Myanamr Express
— Lifestyle, အလှအပ —
သင့်ကိုနဂိုအရပ်ထက်ပိုပြီး ရှည်လာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်းကောင်း ( ၉ ) ခု
အရပ်မပုပေမယ့်လည်း နဂိုအရပ်ထက် ပိုရှည်လိုသူများအတွက်ရောအရပ်ပုသူတွေအတွက်ရောထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းး
ကောင်းတွေပြောပြလိုက်ရပါတယ်။… Read More သင့်ကိုနဂိုအရပ်ထက်ပိုပြီး ရှည်လာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်းကောင်း ( ၉ ) ခု
— အလှအပ —
အမှန်ကန်ဆုံးအမွှေးရိတ်တဲ့ နည်းလမ်းလေးကို တစ်ချက်ချင်းစီ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။… Read More လူမမြင်အပ်တဲ့နေရာကအမွှေးတွေကို နည်းလမ်းမှန်မှန် ရိတ်နည်း
… Read More လူပိန်ချင်တာမျိုး မဟုတ်ပဲ ဗိုက်ခေါက်အဆီ၊ ခါးဆီ၊ ကျောဆီလို အဆီပိုတွေပဲ ကျချင်တယ် ဆိုသူများအတွက် ဆေးနည်းကောင်း
အဖျားနှစ်ခွဖြစ်နေတဲ့ဆံပင်တွေကို ညှပ်စရာမလိုဘဲ လုံးဝပြန်ကောင်းလာစေမယ့် နည်းလမ်း (၇) ခု
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် ဆံကေသာအလှဟာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက်တော့ အရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်တွေက ပျက်စီးကြမ်းတမ်းနေတဲ့အခါ၊ အဖျားနှစ်ခွဖြစ်နေတဲ့အခါတွေမှာ ဆံပင်လည်း မရှည်နိုင်တော့သလို ဖွာလန်ပြီး မလှမပဖြစ်စေပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ပျက်စီးကြမ်းတမ်းပြီး အဖျားနှစ်ခွဖြစ်နေတဲ့ ဆံပင်တွေကို ညှပ်စရာမလိုဘဲ ပြန်ကောင်းလာစေမယ့် ဓာတုကင်းနည်းလမ်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းလေးတွေကို ခေါင်းလျှော်တိုင်း အသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပြီး သုံးပြီးတဲ့အခါ Dryer နဲ့မမှုတ်ဘဲ သဘာဝအတိုင်း အခြောက်ခံပေးပါ။ (၁) အုန်းနို့ အုန်းနို့အနှစ်ကို ယူပြီး ဆံပင်အရင်းကနေ အဖျားအထိ ရွှဲနေအောင်လိမ်းကာ ဦးရေပြားကို နှိပ်နယ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ Shower cap နဲ့ အုပ်ပြီး ၂နာရီကြာအောင် နှပ်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ခေါင်းလျှော်ရည်အပျော့စားလေးနဲ့ ဆေးကြောပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ (၂) ကြက်ဆူဆီ ကြက်ဆူဆီကို အုန်းဆီနဲ့ရောပြီး ဆံပင်အရင်းကနေ အဖျားအထိ လိမ်းပေးလိုက်ပါ။ Shower cap… Read More အဖျားနှစ်ခွဖြစ်နေတဲ့ဆံပင်တွေကို ညှပ်စရာမလိုဘဲ လုံးဝပြန်ကောင်းလာစေမယ့် နည်းလမ်း (၇) ခု
ထမငျးရညျက မိနျးကလေးတှရေဲ့ အလှအပအတှကျ လြှိုဝှကျခကျြ
ထမငျးခကျြတဲ့အခါ ထမငျးပေါငျးအိုး တှနေဲ့သာ ခကျြကွတော့တဲ့ အခုခတျေမှာ ထမငျးရညျ လို့မေးလိုကျရငျ တျောတျောရှာရမယျ ထငျပါတယျ။ … Read More ထမငျးရညျက မိနျးကလေးတှရေဲ့ အလှအပအတှကျ လြှိုဝှကျခကျြ
ဆံပငျအရှညျနဲ့ကောငျမလေးတှကေို ကောငျလေးတှဘောကွောငျ့ပိုမွတျနိုးရသလဲ ?
ခဈြသူရဲ့ဆံနှယျအရှညျတှဟော ကိုကိုပုရိသတို့အတှကျတော့ စိတျကူးယဉျပနျးခငျးကွီးပါပဲခဈြသူရဲ့ဆံနှယျအရှညျတှဟော အမြိုးသားတှအေတှကျတော့ လဲလြောငျးခငျြစရာ နူးညံ့လှနျးတဲ့ ကတ်တီပါကောဇောတဈခုပါပဲ။… Read More ဆံပငျအရှညျနဲ့ကောငျမလေးတှကေို ကောငျလေးတှဘောကွောငျ့ပိုမွတျနိုးရသလဲ ?
တံတောငျဆဈနောကျက အမညျးကှကျ၊အညိုကှကျတှကွေောငျ့ အကြီင်္လကျတို ဝတျရာမှာ ကွောကျနသေူတှေ၊ဒူးမညျးနလေို့ စကပျတို၊ဘောငျးဘီတို ဝတျရမှာ စိတျညဈနတေဲ့ ပြိုမတေို့ အတှကျ နညျးလမျးကောငျး ကို ဖျောပွပေးခငျြပါတယျ။ … Read More ဒူးနဲ့တံတောငျဆဈပျေါက အမညျးကှကျတှကေို ဖယျရှားနညျး